लक्ष्मीपूजा गर्दा बालेको दियोले अनामनगरको फर्निचर भीषण आ’गला’गी – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on लक्ष्मीपूजा गर्दा बालेको दियोले अनामनगरको फर्निचर भीषण आ’गला’गी
अनामनगरस्थित एउटा फर्निचर शोरुम रहेको घरमा भीषण आ’गला’गी भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार बाजेको सेकुवा पछाडि रहेको फर्निचरको शोरुम भएको घरमा आ’गला’गी भएको हो।
कार्की भवनको ६ तले घरमा राति करिब ८ बजेबाट आ’गला’गी सुरू भएको परिसरले जनाएको छ। उक्त भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा फर्निचर शोरुम रहेको र त्यहीँबाट आगलागी सुरू भएको परिसर प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले बताए।
शोरुमका सञ्चालक अशोक ढकाल हुन्। लक्ष्मीपूजा गर्दा दियो बालेर सञ्चालकले पसल बन्द गरेका थिए। आ’गो निभाउन दुई वटा दमकल, प्रहरी र स्थानीयले प्रयास गरिरहेको सिंहले जानकारी दिए।
‘राति ७:५० बजेबाट आ’गला’गी सुरू भएको जानकारी पाएपछि प्रहरी टोली र दमकल आ’गो निभाउन प्रयासरत् छ,’ सिंहले भने। आगलागी लगभग नियन्त्रणमा आएको जानकारी उनले दिए। आ’गला’गीबाट पचास लाख रुपैयाँको क्षति आँकलन गरिएको सिंहले बताए।
यो पनि -टिकटकमा भाईरल लाईभ दोहोरी ‘चोली मैल्यै भो’ गाउने सानी गायिका पुजा देवकोटा मिडियामा । १३ बर्षकी पुजाको जादुमय स्वर (भिडियो हेर्नुस)
पछिल्ले समय टिकटकमा एक लाईभ दोहोरीका बिभिन्न टुक्काहरु भाईरल छन् । मानसिंह खड्का युटुब च्यानलबाट आएको चोली मैल्यै भो गीतमा गाईएको उक्त लाईभ दोहोरीबाट बाल गायिका पुजा देवकोटाका टुक्काहरु टिकटकटकमा सबैले रुचाए । यसैबिच पुजा मिडियामा आईन् । आफ्नो गीतमा चलेका कलाकारहरुले टिकटक बनाउँदा उनी खुशी छिन् । पछिल्ले समय सारेगमप रियालिटी शोबाट बाहिरिएकी पुजा कुनै समय आफ्नो बुवा खोज्दै काठमाडौं आएकी थिइन् ।
भाईरल बाल गायिका पुजा देवकोटाका बुवा घर फर्किए । करिव पाँच बर्षदेखि सम्पर्क बिहिन भएका पुजाका बुवा विश्वभरि कोरोनाको प्रकोप चलिरहेका बेला घर आए । लम्कि मल्टिपल क्यापसमा १४ दिन करेन्टाईनमा बसेर हिजो मात्रै पुजाका बुवा घर आईपुगे । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा एउटा अार्मिको घरमा करिव पाँच बर्ष देखि काम गर्दै आएको थिए पुजाका बुवाले भन्नुभयो, कोरोनाको प्रकोपका कारण प्रदेशमा रहेका सबै नेपालिलाई काम गर्ने ठाँउ बाट घर पठाईदिएपछि उनी पनि घर आएको बताउछन् । यति बर्ष सम्म कहाँ हराउनु भएको थियो ? के यी साना नानि बाबुको माया लागेन ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले माया लाग्थ्यो तर लागेर के गर्नु म संग मोबाइल पनि थिएन र नजिकै कोहि नेपालिहरु पनि नभएका कारण घरमा सम्पर्क हुन सकेन उनले भने । पुजाको घर पनि बन्यो । यतिबेला उनी काठमाडौंमा बसेर पढिरहेकी छिन् । शिशिर भण्डारीसँग उनले यसरी दुख सुखका कुराहरु साटिन् ।
← छोरी सारा अली खानको खुलासा : पिता सैफसँग छुट्टिएपछि मेरी आमा अमृताले …. → दिदीबहिनीले दाजुभाइको पूजा गरी भाइटीका मनाइदै, यस्तो छ भाइपूजा गर्ने विधि